VaTemba Mliswa Vochengetedzwa neMapurisa kuEsigodini
Chivabvu 29, 2016
Mutungamiri wesangano reYouth Advocacy for Reform and Democracy kana kuti YARD VaTemba Mliswa vakachengetedzwa nemapurisa kuEsigodini, kuMatabeleland South mushure memusangano wavange varonga.
Zvinonzi VaMliswa vasungwa pamwe chete nevamwe vechidiki vesangano ravo vanosvika makumi maviri apo vange vachiita musangano. Kanzura weZanu-PF munzvimbo iyi, VaPatson Sibanda havana kufara nemusangano uyu zvapa kuti vadaidze mapurisa uye vechidiki veZanu-PF.
Mutauriri weYARD VaTinotenda Mhungu vaudza VaSibanda kuti pasi pebumbiro remutemo vane kodzero yekuita misangano murunyararo uye vayedza kuvaratidza bumbiro remutemo iri. Asi vati VaSibanda vati havanei nebumbiro remutemo iri sezvo iyi iri nzvimbo yavanotonga.
Kuchegetedzwa kwaVaMliswa uku kunouya zuva rimwe chete mushure mekunge vabatana nezviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC-T zvakaratidzira muguta guru reBulawayo nemusi weMugovera zvichiti hazvisi kufara nematongero emutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.
Pakuratidzira uku, VaMliswa vakakurudzira vanhu kuti vabvunze Zanu-PF kuti mari yemangoda inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu yakaendepi. VaMugabe mbune ndivo vakaudza nyika kuti mari iyi yainge yatsakatika. VaMliswa vakati mari iyi ikasawanikwa ichashandiswa musarudzo dza2018 neZanu-PF.
Hatina kukwanisa kubata mapurisa ekuEsigodini kanawo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo nhare dzavo dzange dzisiri kudairwa.